Apple News ikozvino yave nani kune vaparidzi | IPhone nhau
Apple News ikozvino yave nani kune vaparidzi
Izvozvi, Apple News Iri kuvandudzwa zvishoma nezvishoma kuti iwedzere kumwe kuvandudzwa. Ino nguva kutenderera, izvi zvinowedzera zviri kunanga vaparidzi uye zvirimo mukuyedza kuita kuti zvive nyore kune avo vanopa izvo zvemukati kuti vaone Apple News senzira inobatsira. Nechivandudzo chitsva mufomati yeApple News, zvinyorwa zvacho zvichatipa rumwe ruzivo, kusanganisira zvinhu zvakaita sePekuita neMepu izvo zvinobvumidza zvinyorwa zvitsva kuratidza nzvimbo dzakakosha dzenyaya, ne "Pushpins" uye maPoints ekufarira.
Kune rimwe divi, ikozvino iyo vaparidzi vanogona kusarudza yavo mureza kuti iratidze pane ako mageru. Kusvika parizvino, izvo zvatakaona mune zvatinoda chaive mufananidzo wakawandisa wekuburitswa, kuti mune yakanakisa kesi sezvo paive nezvimwe zvaingoratidza mufananidzo weimwe yenyaya dzekupedzisira dzakaburitswa. Neshanduko iyi, Apple News ichave inokwezva, asi mashandisiro ayo acharamba akaita sezvazviri kusvika zvino.
Apple News inogadziridza pamwe nekuvandudzwa kwevaparidzi
Sezvatakambotaura, iyo yekuvandudza, iyo inosanganisirawo zvimwe zvekuvandudza zvakare kune vaparidzi, iri kutumirwa kuburikidza neOTA uye iri kusvika kune vakawanda nevashandisi. Asi isu vedu mune imwe nyika iri kunze kweUnited States tichazofanira kumirira kushandisa Apple nhau yekushandisa. Apple News yakaburitswa izvozvi mwedzi gumi nembiri yapfuura, paWWDC 11, uye vazhinji vedu takafunga kuti tinogona kumira kushandisa maapplication senge Flipboard kutanga kushandisa yemuno, asi isu tichakamirira.
Sechikumbiro chinokutendera iwe kuwedzera mapeji enhau kubva kuSafari, ndinofunga Tim Cook nechikwata chake havana kururama nekusabvumidza kushandiswa kweApple News kune dzimwe nyika, nekuti semuenzaniso, kuSpain taigona kuishandisa seinonyanya kukwezva. RSS application kupfuura iyo iri muApp Store. Chinhu chakanaka pamusoro pekumirira ndechekuti, kana chasvika munyika medu, iko kunyorera kuchanyatso kubwinyiswa. Gore rega rega rine sirin'i yakanamirwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » IPhone maapplication » Apple News ikozvino yave nani kune vaparidzi
Instagram inounza kwazvo mhuka yekuvandudza kusvika nhasi
TimePorter, zvese zvaunoda kuti ufambe neako Apple Watch